Kooxda Newcastle United oo Shan Ciyaaryahan Amaahisay Kooxda Rangers – Radio Muqdisho
Kooxda Newcastle United oo Shan Ciyaaryahan Amaahisay Kooxda Rangers
Kooxda Newcastle United oo ka ciyaarta horyaalka Premier League-ga ayaa shan ciyaaryahan amaahisay kooxda Rangers oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka Scotland.
Ciyaaryahanada kala ah Gael Bigirimana, Remie Streete, Shane Ferguson, Haris Vuckic iyo Kevin Mbabu ayaa inta ka dhiman xili ciyaareedkan ka ciyaari doono garoonka Ibrox oo ay ku ciyaarto kooxda Rangers.
Milkiilaha kooxda Newcastle United Mike Ashley ayaa daneynaya in uu ka mid noqday saamileyda saamiga ugu badan ku leh kooxda Rangers, isagoo hada leh saami dhan 8.9 boqolkiiba.
Ciyaaryahanada kala ah Bigirimana oo 21-jir ah,Haris Vuckic oo 22-jir ah iyo Shane Ferguson oo 23-jir ah waxa ay ka ciayaraan khadka dhexe,halka ciyaaryahanada kala ah Remie Streete oo 20-jir ah iyo Kevin Mbabu oo 19-jir ah ayaa ka ciyaaraan daafaca.
Kooxda Rangers ayaa hada kaalinta labaad uga jirto kala horeynta horyaalka heerka labaad ee dalka Scotland,waxana ay afar dhibcood ka hooseysaa kooxda Hearts oo hogaamineysa horyaalka.
Kooxda Tottenham oo Ku Guuleysatay Iibka Ciyaaryahan Dle Alli